Le villa yaxhotyiswa ngesitayile ngabayili abancinci bangaphakathi ngefanitshala yangaphandle eyenziwe ngomthi wemango.
Igumbi ngalinye linikwe ngokwalo kwaye likunika umoya ococekileyo weholide!
Oomatrasi abatofotofo, amagumbi okulala anomoya opholileyo kunye neinethi zengcongconi ezakhelwe ezifestileni zikuvumela ukuba ulale ngoxolo busuku ngabunye!
Itotali yamagumbi amane amanzi (iishawa ezine kunye nebhafu enye) zinika intuthuzelo eyaneleyo ukunciphisa amaxesha okulinda abe mncinci.
Indlu enkulu inamagumbi okulala abantu abasi-8, iindawo ezimanzi ezimbini, indawo yokuhlala neyokutyela, iterrace eyi-90m2 enombono wolwandle kunye nekhitshi elimangalisayo elenziwe ngebhastile laseCarrara.
Indawo yedama ... indawo endiyithandayo. Ngeentsuku ezifudumeleyo, ndidla ngokuchitha imini yonke apho. Ukuzola kwendalo akunakuchazwa. I-infinity pool intle. (jonga umfanekiso weprofayili) Ishawa yangaphandle kunye nendlu yangasese yangaphandle (ngokuqinisekileyo endlwini kodwa ifikeleleke ukusuka ngaphandle) inika zonke izinto ezithuthuzelayo zokuphumla imini yonke.
Kwindlu yokubhukuda uya kufumana yonke into enqwenelwa yintliziyo yakho. Ifriji enamanzi kunye ne-ice dispenser iyasebenza kakhulu. Umabonwakude onoqhagamshelo lwe-Intanethi ulungele ukudlala esona sandi sibalaseleyo kwiiMegaboom ezintathu ze-UE 3. I-Nikki Beach iziva ilungile ...
Ngokuzenzekelayo, iNetflix kunye nezinye ii-apps zifakwe kuzo zone iiTV ezihlakaniphile. Ngoko unokuqhubeka nokubukela uthotho lwakho nangexesha leeholide.
I-UE Mega Boom ezimbini ziyafumaneka ukonwabela umculo ophezulu kunye neeshisha ezimbini zokuphumla ngorhatya ngasechibini. (kufuneka icelwe kumamkeli-zindwendwe)
Lilonke, le ndlu isuka ku-A-Z ibonelela ngayo yonke into oyifunayo kwivilla kudidi lwakho!